“ခါတော်မီ စွန်ရဲအင်းအတွက်အတွေးတစ်စ “ | Myanmar Gazette News Media Forum Network
My Dear Diary » “ခါတော်မီ စွန်ရဲအင်းအတွက်အတွေးတစ်စ “	3
“ခါတော်မီ စွန်ရဲအင်းအတွက်အတွေးတစ်စ “
Posted by ကိုပေါက်(မန္တလေး) on Jul 12, 2016 in My Dear Diary |3comments
“ခါတော်မီ စွန်ရဲအင်းအတွက် အတွေးတစ်စ”
အခုရက်ပိုင်း လည်ကြပါတ်ကြတာနဲ့ပါတ်သက်ပြီး ဖေစ်ဘုတ်စာမျက်နှာမှာ
ရေပန်းစားတာကတော့“ စွန်ရဲအင်း “ပါဘဲ။
အချို့ကတော့ သဘာဝအလှတရားတစ်ခု ပျက်စီးပါပြီဆိုပြီး ကန့်ကွက်ကြပါတယ်။
စဉ့်ကိုင်အလွန် လမ်းဘယ်ဘက်ခြမ်း(မန္တလေးအခေါ် အရှေ့ဘက်ခြမ်း)
ဆိုင်းဘုတ် ကျောက်ပြားကြီး စိုက်ထားတာတွေ့ရင် အဲဒီလမ်းအတိုင်း ကွေ့ဝင်လိုက်ပါ။
လမ်းခွဲတွေ့ တိုင်း ညာဘက်လမ်းကို လိုက်သွားပြီး လမ်းအဆုံးရောက်ရင်
စ ၀င်ဝင်ခြင်းကတော့ ကတ္တရာလမ်းဖြစ်ပေမယ့် နောက်ပိုင်းမှာတော့ ကျောက်ခဲနဲ့မြေရောတဲ့
အင်းထဲကို ကွေ့ဝင်တဲ့လမ်းကတော့ အောက်ခံမြေက မြင့်တဲ့အတွက်
စွန်ရဲအင်းက အတွင်းပိုင်းမှာရှိတော့ အရင်က လူသိနည်းပါတယ်။
အလှအပတရားကိုရှာဖွေကြတဲ့ ဓါတ်ဖမ်းသူတွေက အရင်တွေ့ခဲ့ကြတာပါ။
အင်းဆိုမှတော့ ငါးဖမ်းတဲ့လုပ်ငန်းက သေချာပေါက်ရှိပြီပေါ့။
နောက်ပြီး ကြာပင်တွေကနေ လျှော်ထုတ်တဲ့လုပ်ငန်းလဲရှိပါတယ်။
ကြာဝတ်ဆံတွေကို ဘဲ ရောင်းဘို့အတွက်ယူကြတာပါ၊
ဟိုအရင်ကတော့ ကြာပွင့်ဖတ်တွေကို ဒီအတိုင်းချွေချလိုက်တာပါဘဲ။
ဒါပေမယ့် အလှတရားကို မြင်တတ် လှသထက်လှအောင်စီရင်တတ်လွန်းတဲ့
ဓါတ်ဆရာများကတော့ လှေတွေ ရယ် ချွေချထားတဲ့ကြာပွင့်ဖတ်တွေနဲ့လူတွေကို
ပေါင်းပြီး လှပပြီး အမြင်ဆန်းတဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကိုဖန်တီးယူခဲ့ကြပါတယ်။
စွန်ရဲအင်းပုံတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံဆုတွေရကြသူရှိသလို ဖေစ်ဘုတ်စာမျက်နှာများပေါ်တင်
တဲ့အခါ မြင်ရသူအပေါင်းက like တွေ တပြုံတမကြီးပေးခဲ့ကြပါတယ်။
ဘယ်မှာလဲ ဘယ်နေရာလဲ လို့ မေးရင်းကနေ
ဓါတ်ဆရာတွေ တစ်ယောက်ပြီးတစ်ယောက် လမ်းပေါက်ခဲ့ကြပါတယ်။
ကျနော်ကိုယ်တိုင်လဲ ၂၀၁၄ ခုနှစ်ထဲမှာ နှစ်ကြိမ် ရောက်ခဲ့ပါတယ်။၏
မနက်လေးနာရီခွဲလောက် မန်းလေးကနေထပြီး သွားကြတာပါ။
မနက်ခင်းမှာငါးဖမ်းလှေလေးတွေထွက်စအချိန်မှာ ပါတ်ဝန်းကျင်ကလဲ အေးဆေးတိတ်ဆိတ်ဆိုတော့
ကမ်းစပ်နံဘေးမှာရှိနေတဲ့ ကုက္ကိုပင် ခပ်ကိုင်းကိုင်းလေးနဲ့ ငါဖမ်းလှေကလေးတွေကိုတွဲ့ပြီး
ကျနော်တို့ လှေတစ်စင်းငှားပြီး ကန်ထဲကို လှေပါတ်စီးရင်းဓါတ်ပုံတွေရိုက်ကြပါတယ်။
အဲဒီအချိန်က ကြာတုံးချိန်ဆိုတော့ ကြာပွင့်တွေ မမြင်ခဲ့ရပါဘူး။
အင်းရေကတော့ ရွှံ့ရေအရောင် ခပ်နောက်နောက်ပါဘဲ။
ကျနော်ကတော့ လှေပေါ်မှာမတ်တပ်ရပ်လိုက်ရင်း ဓါတ်ဖမ်းတာပေါ့။
ကျနော်တို့ အားလုံး ငါးယောက်ပါ။
၂၀၁၄ သြဂုတ်လထဲမှာ တစ်ခါထပ်ရောက်ပါတယ်။
ဒီတစ်ခါလဲ မနက်စောစော ထပြီးသွားတော့
အဲတော့ ကြာပန်းလိုချင်တဲ့ကျနော် နွံထဲမှာခြေကျွံမကျအောင်
စမ်းတ၀ါးဝါးသွားရင်း လိုချင်တဲ့ကြာပန်းကို ရအောင်ရိုက်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
ကျနော်တို့ရောက်တော့ ကမ်းစပ်မှာလှေအကြီး မရှိပါဘူး။
အဲ့ဒီအခေါက်ကတော့ အင်းရေပြင် ကို လှော်တက်နဲ့ရိုက်ပြီး ငါးတွေကိုလှန့်ပြီး
ဒီတစ်ခေါက်လဲ ကျနော်တို့အဖွဲ့ဘဲရှိတော့ ဓါတ်ပုံရိုက်ရတာအေးဆေးပါဘဲ။
အင်းပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လမ်းလျှောက်ပြီး ဒေါင့်ပေါင်းစုံကနေ ဓါတ်ပုံရိုက်လို့ရခဲပါတယ်။
အခု၂၀၁၆ ပြီးခဲ့တဲ့လပိုင်းမှာတော့ ဖေစ်ဘုတ်ပေါ်မှာစွန်ရဲအင်းဆိုတဲ့နာမယ်ကိုတွေ့နေရပါတယ်။
ကြာပန်းပွင့်တွေနဲ့ ဆယ်လဖီပုံတွေကလဲ ဖေစ်ဘုတ်မှာ ပလူပျံလို့ နေပါတယ်။
မရောက်ဘူးလို့သွားချင်သူများကလဲ ဘယ်လိုသွားရလဲ လို့ ဖွဘုတ်မှာမေးကြတာပေါ့။
အချို့ကတော့ ကြာပန်းတွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ခူးရင်ကြာတွေမျိုးတုံးသွားမတဲ့။
ဖေစ်ဘုတ်မှာ Like တစ်ချက်ရဘို့ အတွက်ကြာပန်းတွေကို မဖျက်ဆီးသင့်ဘူးတဲ့။
ကြာပန်းလေးတွေနဲ့ ဓါတ်ပုံတွဲရိုက်ရတာက သိပ်ပြီး ရိုမင်းတစ်ဖြစ်သတဲ့။
အချို့တော့ လူတွေအဲလို အလာများရင် အင်းရဲ့သဘာဝအလှတွေပျက်ကုန်မှာစိုးသတဲ့။
အချို့ကတော့ ဒီလို လူတွေအလည်လာခဲ့တဲ့အတွက် ဒေသခံတွေမှာ
အလုပ်အသစ်တွေရ ၀င်ငွေတွေ တိုးလာတော့ စားရေးသောက်ရေးအဆင်ပြေတာပေါ့တဲ့။
အချို့ကတော့ ဧည့်သည်တွေစွန့်ပစ်ခဲ့တဲ့ အမိူက်တွေက ပါတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမူ့ဖြစ်စေသတဲ့။
ဒါကတော့ ဖွဘုတ်စာမျက်နှာပေါ်မှာ ကိုယ့် အမြင်ကိုယ်ရေးကြတာလေးတွေပေါ့။
ပြီးခဲ့တဲ့ ဥပုဒ်နေ့ကတော့ဓါတ် မိတ်ဆွေတစ်ယောက်က စွန်ရဲအင်းကို သွားချင်တယ်။.
အဖော်လိုက်ခဲ့ပါ သူ့ကားနဲ့လာခေါ်မယ် လိုက်ချင်တဲ့ မိတ်ဆွေလဲစုထားပါလို့ဖုန်းဆက်လာပါတယ်။
သူဆက်တဲ့အချိန်က မနက် ၁၁ နာရီ။
ဒါနဲ့ဘဲ စိတ်တူ ကိုယ်တူ မိတ်ဆွေ နှစ်ယောက်ကို လှမ်းဆက်သွယ်ပြီး
နေ့လည် ၂နာရီလောက်မှာ လေးယောက်သား စွန်ရဲအင်းကိုချီတက်ခဲ့ကြပါတယ.်။
ဟိုအရင်က ဘာမှ မရှိတဲ့ ကွင်းပြောင်ပြောင်ကြီးထဲမှာ
ကားအစောင့်တွေဘာတွေနဲ့ အဆင်ကိုပြေလို့ တစ်စီးမှ ကျပ် ၂၀၀ ထဲပါ။
ခြံစည်းရိုးထဲကို လှမ်းကြည့်လိုက်တော့ လူအပြည့်။
အထဲရောက်လို့ကြည့်လိုက်တော့ ကျနော် နှစ်သက်လှတဲ့ အပင်ကိုင်းကိုင်းလေးက
အင်းထဲကိုသွားဘို့ လှေငှားမယ်လုပ်တော့ လှေဆိပ်မှာလူတွေတန်းစီပြီး
အင်းထဲမှာလည်ပြီး ပြန်လာသူတွေရဲ့လက်ထဲမှာလည်း ကြာပန်းစီးလေးတွေကိုယ်စီနဲ့။
ကျနော်တို့ က လေးယောက်ထဲ သွားမယ် ဓါတ်ပုံရိုက်မယ်လို့ပြောလိုက်တော့
ခဏစောင့်ပါ လှေခေါင်းနဲ့ ကြေးညှိပါပြောပါတယ်။
နာရီဝက်ကျော်ကျော် သာ ကြာသွားတယ်
ကျနော်တို့ အလှည့် ကိုရောက်မလာတော့ပါဘူး။
ဒါနဲ့ဘဲကျနော်တို့လဲ အင်းတောင်ဘက်က အင်းထဲကိုရေ၀င်တယ်ဆိုတဲ့
နေရာကို သွားပြီး ဓါတ်ပုံရိုက်ပါတော့တယ်။
ကြာခင်းနားကို ဓါတ်ပုံရိုက်နေရင်းလူသံတွေကြားလို့ လှမ်းကြည့် တဲ့အခါ
လှေတွေက ကြာခင်းထဲကို ၀င်လာပြိးရပ်ပေး။
လှေပေါ်ကလူတွေက မြေပေါ်ဆင်းပြီး ကြာပန်းတွေခူးကြ
စိတ်လွတ်လပ်ပျော်ရွှင်စွာ ရယ်မောခွင့် ရဘို့ ဆိုတာ
ညနေငါးနာရီခွဲလောက်မှာတော့ ကျနော်တို့ လှေဆိပ်ကိုတစ်ခေါက်ပြန်လာတော့
ကျနော်တို့ စိတ်ကြိုက်လှေကို ငှားလို့ရတော့ အင်းထဲကိုသွားခဲ့ကြပါတယ်။.
လှေငှားခကတော့ ပုတ်ပြတ် တစ်သောင်းခွဲ။
မုန့်ဘိုးကြည့် ကျက်ပေးဘို့ ပြောပါတယ်။
လှေသမားလေးတွေကတော့ ပုတ်ပြတ် တစ်ရက်ကို ကျပ်ငါးထောင်ရပါတယ်ပြောပါတယ်။
အင်းအလုပ်ကတော့ ငါးဖမ်းတာ အဓိကလို့ပြောပါတယ်။
အင်းရေက တစ်စထက်တစ်စ တိမ်လာပြီ။
အင်းထဲကို လှေတွေသွားတာ ညနေခြောက်နာရီခွဲအထိဘဲခွင့်ပြုပါသတဲ့။
ကျနော်တို့က လူလေးယောက် လှေသမားကနှစ်ယောက်
လေးယောက်ထဲမှာ ၀တဲ့ သူက နှစ်ယောက်ဆိုတော့ လှေနုပ်ခမ်းက ရေပြင်နဲ့ထိနေတယ်။
အရေးထဲလှေကရေမလုံ တော့ ရေတွေဝင်လာတာကို တဖတ်ဖတ်နဲ့ခပ်ထုတ်နေရပြန်ပါတယ်။
ကြာတောထဲကို လှေဝင်ခိုင်းတော့ မရဘူး ရေတိမ်တယ်ပြောတာနဲ့
လှေသမားနှစ်ယောက်က အောက်ဆင်း ထိုးဝါးစိုက်။
စားသောက်ဆိုင်တွေရှိတော့ လဲ စားကြွင်းစားကျန်တွေနဲ့
အင်းရေကတော့ အရင်ကလဲ နောက်ကျိကျိ အခုလဲနောက်ကျိကျိပါဘဲ။
သဘာဝအလှပျက်မှာစိုးလို့ အင်းထဲကို လှေမစီးရ ကြာပန်းမခူးရဆိုပြီး အပြီး ပိတ်လိုက်မလား။
ဒါဆိုရင် အလှတော့ မပျက်ဘူးလို့ ယူဆနိုင်ပေမယ့် မသေချာလှပါဘူး။
အခုလို ၀င်ချင်သလိုဝင်ထွက်ချင်သလိုထွက်လုပ်မယ့် အစား စည်းနဲ့ကမ်းနဲ့ဝင်ခွင့်ပြုလိုက်ရင်
အင်းနံဘေးမှာ ကပ်ဖွင့်ထားတဲ့စားသောက်ဆိုင်တန်းတွေကို ခြံ ၀င်းအပြင်မှာ
အင်းထဲကို ၀င်မယ်ဆိုရင် ၀င်ခတောင်းပါ။
လှေစီးခ တစ်ယောက်သုံးထောင်ကတော့ များတယ်လို့ ထင်ပါတယ်။
၀င်ကြေးကျပ်တစ်ထောင် လှေစီး ခ ကျပ်နှစ်ထောင် ပုံသေသတ်မှတ်ပေးလိုက်ပါ။
အင်းနံဘေး ပါတ်ဝန်းကျင်မှာ လမ်းလျောက်လို့ ရအောင် ဖန်တီးပေးလိုက်ပါ။
လာရောက်လည်ပါတ်သူတွေကိုလည်း အမိူက်ကို စည်းကမ်းတကျ စွန့်ပစ်ဘို့ တိုက်တွန်းပါ။
နောက်ကြာပန်းတွေကို စည်းမဲ့ကမ်းမဲ့ခူးခွင့် မပြုပါနဲ့။
ခူးချင်ရင် ကြာတစ်ပွင့် ကို ဘယ်လောက်ဆို တာ အခကြေးငွေသတ်မှတ်ပေးပြီး
ကြာခူးဘို့ အတွက်က လှေသမားကို တာဝန်ပေးပါ။
လှေသမားအတွက်ကလည်းတစ်နေကုန် ပုတ်ပြတ် ငါးထောင်ဆိုတာ နည်းလွန်းပါတယ်။
သူတို့ ကို ကြာပန်းခင်းကို လည်းစောင့်ရှောက်ခိုင်းရင်းလုပ်ခတိုးပေးသင့်ပါတယ်။
ဒီတာဝန်တွေကို ဘယ်သူ ယူပေးမလဲ ဆိုတာတော့
Thint Aye Yeik says: မရောက်ဖူးသေးဘူး။ ရောက်ချင်တယ်။
အခုတော့ ရောက်ဖူးသူတွေ ပြောပြတာကိုပဲ လိုက် ဖတ်….လိုက်ကြည့်နေရသေး…
အောင် မိုးသူ says: ကြာပန်းတွေကိုတော့ချစ်တယ်။ သိပ်အထွေအထူးကြီး မဟုတ်ဘူးလို့ ထင်မိတာကြောင့် သွားချင်လှပါပေ့ဆိုတဲ့ နေရာထဲတော့ မပါမိတာအမှန်ပဲ။
အရင်ကကျော်စွာဦးကြီးမိုက် says: ဘယ်နေရာမဆို လာရောက်လယ်ပါတ်သူတွေများလာတာနဲ့ အမှိုက်ကိစ္စ ပြသနာဖြစ်ဖြစ်နေတာဆိုးလှသဗျာ